LEGO ရဲ့ Captain C ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲarter Marvel mech ကပိုကောင်းတဲ့ set လား။
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 355 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
၏ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ…? စီးရီးကငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်မလဲ Lego 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper ပိုကောင်းတဲ့အစုံလား။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အခြားလက်တွေ့ဆန်တဲ့ပုံစံကအလုံးအရင်းထဲကတစ်ခုပဲ Marvel mechs များသည် ၂၀၂၁ တွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး Steve Rogers ၏ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၌ Hydra Stomper ကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အခု What If နှစ်ခုထဲကတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ ယခုလအစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သောအစုံများ၊ နောက်ထပ်အလားအလာများရှိပါသလား။
မျှတသောသတိပေးချက်၊ spoilers များသည် What If …? ကို ၁၉၇၇ တွင်နာမည်တူကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲများကိုအခြေခံထားသောဤနေရာမှအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်စိတ်ကူးယဉ်သည်။ Marvel လိပ်ပြာအကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေများတွင်ရုပ်ရှင်ရုံစကြဝာ ပထမအပိုင်းက Peggy C ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲarter သည်ပထမဆုံး Avenger ဖြစ်လာသည်။
Captain America: Super Avenger စစ်သည်တော်သွေးရည်ကြည်အား Steve Rogers အစား Peggy ထဲသို့ထိုးသွင်းသည်ကိုမြင်ရသည်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစတွင်သူသည်အညံ့ဖျင်းကောင်ဟုငါတို့သိသည်။
အောက်ပါအရာသည် Captain C ကဲ့သို့ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်အတွက်အခန်းကဏ္ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်arter - ဗိုလ်ဗြိတိန်ထက်၊ သူမ၏အင်္ကျီကို ၀ တ်ထားသော Union Jacks သည် Red Skull, ၁၉၄၀ ခုနှစ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလိင်ဝါဒနှင့်ကြီးမားသော tentacled နဂါးတို့ကိုဖြုတ်ချသည်။artမူရင်း ၂၀၁၁ ရုပ်ရှင်မှယူရီးယား
၎င်းသည်တွဲလောင်းကျနေသောအကြီးမားဆုံးမေးခွန်းအမှတ်အသားကိုကိုယ်စားပြုသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomperသို့သော်၎င်းသည်၎င်းအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအရာအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဟုဆိုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် Lego Marvel ဤနေရာတွင်ဆောင်ပုဒ် - ၎င်းအစား၊ Lego Group သည်နောက်ထပ် mech တစ်ခုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။
What If တွင်တောက်ပသောအစိမ်းရောင် Hydra Stomper ၌ပင်ကိုယ်၌မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ချေ။ မော်ဒယ်၊ ဘားသည်အသံတိတ်နေသောe၏ဘေးတွင်၎င်း၏အထင်ကြီးဖွယ်အရောင်အစီအစဉ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်artဇာတ်လမ်းတွဲ၏ hy tones ၎င်းကိုတွေ့ခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွင်းအလွန်အကျွမ်းတ ၀ င်ခံစားခဲ့ရသည် ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man mini-mech သုံးလုံးစင်ပေါ်သို့ရောက်သည်။
What If ... ၏ဤပထမအပိုင်းကို အခြေခံ၍ အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဗိုလ်ကြီး C အကြားဗိုလ်လုပွဲ၏ပြဇာတ်၏ထူးခြားသောဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမည်artEr နှင့်ဘာထူးဆန်းသည့်အရာမဆို-Shuma-Gorath သည် Madness of the Multiverse of Doctor Strange အတွက်ဖြစ်နိုင်သောလူကြမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၇၆၀၆၀ Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum နှင့်ဆင်တူသည်။
ဒါကပြောတယ်၊ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကသူ့ရဲ့အဆက်အစပ်ကိုမသိဘဲနဲ့ Lego set သည် Hydra Stomper ကိုမော်ဒယ်တစ်ခုအတွက်သိသာထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုအဖြစ်အလွယ်တကူသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူ့အတွက်ကြိုးတန်းနိမ့်တဲ့အသီးနဲ့တူတာဘာကြောင့်လဲ Lego အုပ်စု၊ အဘယ်ကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာအာရုံတစ်ခု (ရယ်စရာကောင်းသည်) သို့မဟုတ် mech တစ်ခုတည်းထက်ပိုထည့်ရန်ပိုကြီးသောဘတ်ဂျက်သည် ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။
သို့သော်လည်း၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုထိုက်သည် Lego အဖွဲ့သည်အယူအဆမှလုပ်ဆောင်လာခဲ့ဖွယ်ရှိသည် art သူ့ရဲ့ If ကဘာလဲဆိုရင် ... ? The Mandalorian သာသွားစရာရှိလျှင်တီဗီရှိုးများအတွက်ရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်နာများသည်ဇာတ်လမ်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ထားသောအသိပညာရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
အကွက်ထဲတွင် minifigures သုံးခုပါ ၀ င်သည်၊ ပထမဆုံး MCU သတ်မှတ်ထားသော Red Skull နှင့်အခြား Captain Carter အတွင်းမှတစ်ယောက် 71031 Marvel စတူဒီယို - 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper မင်းရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိတုန်းပဲ။ (ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ဆောက်မှုကိုအံ့သြဖွယ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာဟုခေါ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ ) ဓားတစ်ချောင်းကိုလက်နှင့်ဆုပ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရွက်ဖျင်ကိုထည့်ပါ။
← Lego Star Wars Speeder Bike အနိုင်ရရှိသူကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်
Lego တိုင်း Creator Expert ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရန်သတ်မှတ်သည် →